चिकित्सक टोली चढेको बस दुर्घटना, १४ को मृ*त्यु, काे काे परे ? सुचीसहित – ताजा समाचार
चिकित्सक टोली चढेको बस दुर्घटना, १४ को मृ*त्यु, काे काे परे ? सुचीसहित
लापाज । दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बोलिभियामा आइतबार मध्यरातमा भएको सडक दुर्घ*टनामा कम्तीमा १४ जनाको मृ*त्यु हुनुका साथै २१ जना घाइते भएको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीका अनुसार एउटा यात्रुबाहक बस सडकबाट करिब २०० मिटर गहिरो खोंचमा झरेको थियो । बोलिभियाको राजधानी लापाजबाट उत्तरतर्फ करिब २५१ किलोमिटर टाढाको चाराजानी नगरको छेउमा उक्त बस दुर्घ*टनाग्रस्त भएको थियो । यो बोलिभियाको दोस्रो ठूलो शहर हो ।
स्थानीय सञ्चार माध्यमका अनुसार मृ*त्यु भएकामध्ये ११ जना महिना र तीन जना पुरुष रहेका छन् । उक्त बस लापाजबाट अपोलो शहरतर्फ गइरहेको थियो । अपोलो क्षेत्रमा स्वास्थ्य शिविर आयोजना गर्न स्वयंसेवी चिकित्सक र नर्सको टोली उक्त बसमा रहेको बताइएको छ ।
प्रहरीले बस दुर्घटनाका बारेमा अनुसन्धान शुरु गरेको जनाएको छ । रासस
श्रीमतीको पारो चढेपछि देखाइन यस्तो हर्कत, हेर्नुहाेस विश्व चकित हुने भिडियाे !!
एजेन्सी। चीनको गुईझोउमा गुडिरहेको कारभित्र बसेका श्रीमान श्रीमतीको झगडा भयो । श्रीमानले श्रीमतीलाई कार रोक्न भने । त्यसपछि श्रीमतीले गाडी रोकिन् । श्रीमानलाई कारबाट बाहिर निकालिन् । तर गाडीको इन्जिन बन्द गरिनन् । श्रीमान कारको इन्जिन बन्द गराउनको लागि बोनटमा बसे । त्यसबाट रिसाएकी श्रीमतीले कार अगाडि बढाइन् ।
श्रीमतीले एक्कासी कार दौडाएपछि श्रीमान कारको बोनटमै झुण्डिए । यति हुँदा पनि श्रीमतीले कार रोकिनन् । श्रीमानलाई त्यतिकै झुण्ड्याएर उनले ५ किलोमिटरसम्म कार दौडाइन् । यो घटनाको भिडियो सिसिटिभीका साथै अगाडिबाट आइरहेका अन्य कारको ड्याशबोर्डमा जडित क्यामेरामा रेकर्ड भयो ।
महिलासँग उनीहरुका ३ सन्तान पनि कारमा थिए । थानीय पुलिसले घटनाको भिडियो सामाजिक संजालमा शेयर गरेको छ । पुलिसका अनुसार घटनामा श्रीमानलाई चोट भने लागेको छैन । महिलाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको र विवादबारे जाँच भइरहेको पुलिसले जनाएको छ ।